Fianarana avy amin'ny seminera: SEO ho tetikady fampandrosoana ny Digital Marketing
Ny fandraharahana an-tserasera dia mitaky fanatrehana amin'ny aterineto. Raha tsy izany, ny mpividy diamitsidika ny tranonkalany amin'ny fahadisoana na ny fahalalàny fahalianana. Ny anarana ampiasain'ny fivarotana, ny logo sy ny vokatra dia manome fampahalalana izay afaka mifandrayho an'ny mpanjifa amin'ny famantarana. Ny fampahalalana toy izany dia tena ilaina amin'ny fametrahana vaovao izay mamorona ny fisian'ny tranonkalaraharaham-barotra. Ny tranonkala optimisma dia manana fampahalalana izay mora azo, ary maro ny mpanjifa mahita azy ireo amin'ny ezaka kely.
Nitady fikarohana 13 lavitrisa isam-bolana ny Internet - logiciel de gestion de. Ny fametrahanaNy Search Engine Optimization (SEO) izay vohikala tranonkala izay mora jerena dia toy ny tetikady ara-barotra maimaim-poana amin'ny Internetraharaham-barotra.
Amin'ny alalan'ny SEO, ny orinasa dia afaka mitondra ny mpanjifany ao amin'ny tranonkalany mba hahitana izayNy tranonkala dia ho azy ireo amin'ny fampitomboana ny fidiram-bolan'ny orinasa. Azo tratrarina izany raha toa ka mahita lalam-pito ambony hatrany ny orinasany pejy Search Engine. Ny dokam-barotra maimaimpoana sy Pay Per Click dia sasantsasany amin'ireo fomba tsara indrindra omena.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manome sehatra tena manan-danja amin'ny tetik'ady ara-barotra amin'ny aterineto izay mila ny raharahan'ny orinasan-tserasera.
Ny fomba fiasan'ny SEO
SEO dia mampiasa fitaovam-pikarohana izay ny tanjona dia ny mikapoka, mijery, manangona indeksesary hamerenana ny fampiasana algorithm ireto manaraka ireto.
1. Density sokajy:
Ny famerimberenana teny fanalahidy dia mampitombo ny maha-zava-dehibe ny pejy manokana.
Mitady metadata amin'ny tahirin-kevitra HTML araka ny nomen'ny Meta tagsmanomboa ny fahafaham-po.
Ny votoatin'ny kalitaon'ny teny maoderina manan-danja dia miantso olona bebe kokoa ary mandefa azy ireo mankany amin'ilay tranonkala.
Ny rohy eo amin'ny tranonkala hafa manondro ny tranonkala dia manome toerana ambony kokoa amin'nytoerana ho an'ny fifamoivoizana bebe kokoa.
Ny fampahalalana momba ny firaketana, ny fikolokoloana, ny algorithms Search Engine, ary ny fikarakarana dia manome afahatakarana bebe kokoa momba ny SEO.
Mpanazava na mpitaingina dia rindrambaiko izay mijery ny tranonkala amin'ny rafitra fampirimanadia mamela haingana kokoa sy mahomby amin'ny fanangonana ny fampahalalana taty aoriana amin'ny milina fikarohana. Tsy manamarina ny fanavaozana momba ny aterineto ny mpikirakirany votoaty isan'andro, nefa mitazona fahatsiarovana sy lisitra any amin'ny tranokala, maimaim-poana na toerana fitsidihana amin'ny fanodinana haingana amin'ny alalan'ny fitaovan'ny fikarohana.
Namorona angon-drakitra misy ny votoatin'ny pejy ny Spider. Ireo endriny izayAmin'ny ankapobeny, ny tahiry dia manome vaovao momba ireo tranokala sy tranonkala nokarohin'ny motera fikarohana. Famerenana ny votoatin'nyNy endriky dia avy amin'ny teny sy teny mifamatotra. Ny SEO dia tokony ho marina raha tokony hahatakatra ny tranonkala ny fikarohana.
Ny algorithm ao amin'ny Search Engine dia ahitana karazana fitsipika sy fitsipika miavaka izay mamaritra nylanjan'ny pejy web. Manana fahafahana hamantatra ilay pejy marina izy ireo na raha manana fampahalalana mahasoa ny votoaty web raha ilaina avy amin'ny mpampiasa.
Ny dingana farany amin'ny fizotry ny fikarohana ao amin'ny pejin'ny tranonkala SEO dia dingana sarotradia midika ny fahatakarana ny votoaty notadiavina ary mifanandrify amin'ny indexes sy server. Farany, miverina ny milina fikarohanalisitry ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny teny sy ny baiko ampiasaina.
Ny fampiasana ny SEO, noho izany, dia manamora ny fampiasana ny fampahalalam-baovao iray manokanatranonkala eo an-tampon'ny fitadiavana ny fikaroham-bika mora ataon'ny mpikaroka iray. Ny tetik'ady ara-barotra SEO dia tena sarotra arak'izay asehony fahitana ny orinasa manao e-commerce amin'ny fanodinana ny votoatin'ny pejy web ho an'ny fitaovan'ny fikarohana.